Madaxweyne Xasan Shiikh Oo Markii Ugu horaysay Ka Hadlay Arimaha Daacish | Sahan radio
Madaxweyne Xasan Shiikh Oo Markii Ugu horaysay Ka Hadlay Arimaha Daacish
Madaxweynaha Dowlada Federaalka Somaliya Mudane Xasan shiikh Maxamuud ayaa Markii ugu horaysay Ka hadlay arimaha ururka Daacish , Madaxweynaha Ayaa Cambaareyey Falkii Ay kula Kaceen rag u Dhashay itoobiya oo ku sugnaa Liibiya kuwaas oo ay ku gawraceen Meel kamid meelaha ay ka taliyaan ururka daacish.
“Dowladda Federaalka ee Soomaaliya waxay si adag u cambaareyneysaa falkan waxashnimada ah, Falkan ay ku kacdey kooxdan argagixisada ah waa dembi weyn oo bahalnimo ah. Falkani waa burcadnimo la huwiyey magaca aydoloojiyad aan waxba ka jirin. Waxaa cad in kooxda ISIL ujeeddadeedu ay tahay oo keliya inay faafiso fariin waxashnimo iyo dhibaateynta dad aan waxba galabsan. Waa dembiileyaal ka soo horjeeda ilbaxnimada; waa bahalo quuta dhiigga wiilasheena iyo gabdhaheena,” ayuu yiri madaxweynaha.